အချိုပွဲ | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » အချိုပွဲ
ခုတစ်လော Facebook နဲ့ အဆင်ပြေနေတယ်.. ။ဖွင့်ပြီးရင်တော်တော်နဲ့ ပြန်မပိတ်ဖြစ်တော့ဘူးလေ. ။ သိ
တယ်မဟုတ်လား..။ စာတောင် မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်.။ သဘောကျတဲ့ပုံလေးတွေပြဦးမယ်.။အကုန်
ဒေါင်းထားတာ.။ စာတွေဖတ်တာများလို့ အီနေရင် အအီပြေ အချိုပွဲလေးပေါ့ဗျာ..။
အာဖရိက က ဘိလိယက် ၀ါသနာအိုးတွေတဲ့ . စဉ်းစားကြည့်ရတာ ဆင်ထားတာထက်
ပေါက်စ ငယ်တုန်းက ပုံနဲ့တူလို့ ဒေါင်းထားတာ. ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး..
ကျွန်တော်လည်း (ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်.) အဲဒီလို သမီးလေးတစ်ယောက်လိုချင်တယ်....။
အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်..။ Horror Movie တဲ့..။ ကြောက်တဲ့ပုံလေးတွေပေါ်တယ်နော်.။
ဒီပုံကိုလည်း တော်တော်သဘောကျပါတယ်..။ လိင်ပြောင်းတဲ့ခွဲစိတ်မှုကလောလောဆယ် ထိုင်း
ဘယ်လို ဓါတ်ပုံဆရာက ဘယ်လိုရိုက်ထားလဲ မသိပါဘူး.. တကယ်ပဲ တိုင်နေတဲ့ပုံလေးပေါ်
သူတို့တော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ အမယ်လေး. ရေများဝင်လိုက်လို့ကတော့ ဆိုတာ
အားလုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်တဲ့.
ဒီပုံက ဘယ်က ရှာလာလဲ မသိပါ.. ။ကျွန်တော့်အထင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.
အိန္ဒိယမှာ ကွန်ပျူတာ ဘယ်လောက်ပေါသလဲ တွေးကြည့်ပေါ့ဗျာ...။
ဒါကတော့ မော်စကိုကကျောင်းကပွဲမလုပ်ခင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့ ရုရှားမတွေပါ..။
တရုတ်မနဲ့တွေ့မှ ကျွန်တော် တို့သမ္မတကြီးလည်း ၀ူဒိန့်ရှိန် ဖြစ်သွားရှာတယ်.. ။
3D ပန်းချီ ကတော့အံ့မခန်းပဲဗျာ....။
တက်ကြမလား.. ဇ ရှိရင်ပေါ့ဗျာ.
နေနှင့်ဦးပေါ့ကောင်မရာ. .. ထင်းခွေမကြုံရေခပ်ကြုံမှာပေါ့..ဟွင်း..
ဒါကတော့ အကြိုက်ဆုံးပုံပေါ့..။ ငှဲငှဲ . ပုံနာမည်ကိုတော့
ပုံလေးတွေကို အားလုံးလဲ သဘောကျမယ်ထင်တယ်..။ စာမရေးချင်လို့ လျှောက်တင်နေတာမဟုတ်ပါ
ဘူး..။ စာတွေက ရေးထားတာ..များကြီးပဲ Draft ထဲမှာ ရှိတယ်. ။ မတင်ချင်သေးလို့.. အီသွားမှာစိုးလို့ အချိုပွဲ
လေးပေါ့ဗျာ.. ။ ဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ကြပါဦးလို့..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 30, 2012 at 2:55 PM
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ရုရှမတွေ လန်းလှချည်လားး)
ကိုရင်လေးနဲ့ ကလေးလေးတွေ ချစ်စရာလေး
Snow May March 30, 2012 at 3:16 PM
အချိုပွဲဆိုလို့ ဘာအစားအစာတွေပါလိမ့်ဆိုပြီး ထင်နေတာ. :) ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုဆိုတော့ အစားအသောက်ပဲ ပြေးမြင်မိတာကိုး..။ ဓါတ်ပုံတွေ တကယ် သဘောကျတယ်. :)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 30, 2012 at 8:16 PM
Candy March 30, 2012 at 9:18 PM
ဒါမျိုးမိုက်တယ်.. ရီရတယ် အဟတ်
ကိုရင်လေးပုံကို သဘောအကျဆုံးပဲဗျာ.. အနောက်မှာ ခြင်္သေ့ရုပ်ထုတွေ့တယ်ဆိုတော့ကာ ကြည့်ရတာ မြန်မာပြည်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ဟုတ်မလားတော့မသိဘူး.. ဘာပဲပြောပြော သဘောကျတယ်..
လိုင်းသိပ်မကောင်းလို့ အနောနိမတ် နဲ့ပဲ မန့်သွားပါတယ်.
Anonymous March 31, 2012 at 7:45 AM
ပစ်ပစ် March 31, 2012 at 9:43 AM
ရင်ဆူး March 31, 2012 at 10:41 AM
အချိုပွဲလေး လာမြည်းသွားတယ်ညီရေ ....... everybody has their own way ဆိုတာလေး သဘောကျတယ်...ကျန်တာတွေလည်း အကုန်မိုက်တယ်....
ဖြိုးဇာနည် April 1, 2012 at 2:27 AM